ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နိုင်သက်လွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Suphatra Srimaitreephithak အား လက်ခံတွေ့ဆုံ – MOEA
HomeOur Blogပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နိုင်သက်လွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Suphatra Srimaitreephithak အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
October 1, 2019	News	0 Comments
တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နိုင်သက်လွင် သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Suphatra Srimaitreephithak အား ယနေ့ ၁၅:၀၀ နာရီအချိန်တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ကြိုးပမ်းမှုကဏ္ဍ၌ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှ ကူညီပံ့ပိုးပေးမည့် ကိစ္စရပ်များ၊ မြန်မာနှင့်ထိုင်း အိမ်နီးချင်းနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ် မြန်မာနိုင်ငံ ဘက်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေး ကိစ္စရပ်များ၊ တိုင်းရင်းသားများအတွက် အလုပ်အကိုင် ဖန်တီးပေးမည့် အခြေအနေများ၊ မြန်မာနှင့် ထိုင်း နှစ်နိုင်ငံအကြား တိုင်းရင်းသားရေးရာကိစ္စ၌ ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်နိုင်ရေး၊ မြန်မာနိုင်ငံက ဖော်ဆောင်နေသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက် ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း (MSDP) ၌ တိုင်းရင်းသားများက ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထိုင်းနိုင်ငံအနေဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် ကိစ္စရပ်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးကြပါသည်။
တွေ့ဆုံမှု မတိုင်မီ ဧည့်သည်တော်အဖွဲ့သည် ဝန်ကြီးဌာနရှိ တိုင်းရင်းသားရိုးရာ ဝတ်စား ဆင်ယင်မှုပြခန်းများကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ တွေ့ဆုံပွဲသို့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အတူ ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြ ပါသည်။
0 Comments on "ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နိုင်သက်လွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ထိုင်းနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mrs. Suphatra Srimaitreephithak အား လက်ခံတွေ့ဆုံ"
Total Website Visits: 159156